Ch 28 Matthew – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMateu / Ch 28 Matthew
28:1 Zvino mangwanani weSabata, kwakatanga kukura chiedza nesabata rokutanga, Maria Magadharena nomumwe Maria vakaenda kundoona guva.
28:2 uye tarira, kudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika. Nokuti mutumwa waIshe wakaburuka kubva kudenga, uye sezvo akanga pedyo, ikasvika ikakungurutsa dombo, uye akagara pasi pariri.
28:3 Chitarisiko chake chakanga semheni, uye vestment yake yakanga sechando.
28:4 ndokubva, vachitya pake, Varindi vakatya, uye vakava sevanhu vakafa.
28:5 Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi: "Usatya. Nokuti ndinoziva kuti muri kutsvaka Jesu, uyo akarovererwa pamuchinjikwa.
28:6 Haasi pano. Nokuti wakamuka, sezvaakataura. Uyai muone nzvimbo Ishe pakuiswa.
28:7 Ndokuzo, kurumidzai kuenda, munoudza vadzidzi vake kuti wamuka. uye tarira, iye kufanoenda kuGarireya. Ipapo unofanira kumuona. izvozvo, Ndagara ndakuudzai. "
28:8 Uye vakabuda paguva, vachitya uye vachifara kwazvo, achimhanya kuzivisa vadzidzi vake.
28:9 uye tarira, Jesu akasangana navo, vachiti, "Kwaziwai." Ivo vakaswedera pedyo vakabata tsoka dzake, uye akanamata kwaari.
28:10 Zvino Jesu akati kwavari: "Usatya. famba, munoudza hama dzangu, kuitira kuti vaende kuGarirea. Ikoko angandiona. "
28:11 Vakati vabva, tarira, vamwe vevarindi vakaenda muguta, uye vakaudza vatungamiri vapristi zvose zvakanga zvaitika.
28:12 Uye kuungana pamwe chete nevakuru, musingadyi zano, vakapa zvakawanda mari masoja,
28:13 vachiti: 'Vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba, patakanga takarara.
28:14 Uye kana izvi zvikanzwika nagavhuna, isu tichamunyengerera, uye isu achakudzivirira. "
28:15 ndokubva, masirivha, vakaita sezvavakanga varayirwa. Uye shoko iri rave rakapararira pakati pavaJudha, kusvikira nhasi.
28:16 Zvino vadzidzi gumi neumwe vakaenda kuGarirea, kugomo uko Jesu akanga arangana navo.
28:17 uye, vamuona, vakamunamata, asi vamwe vakakonona.
28:18 Jesu, richiswedera pedyo, akataura navo, vachiti: "Ndakapiwa simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika.
28:19 saka, vanoenda uye mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene,
28:20 muchivadzidzisa kuchengeta zvose kuti zvandakakurayirai iwe. uye tarira, Ini ndinemwi, kusvikira pakuguma kwenyika. "
Gumiguru 20, 2019
Gumiguru 19, 2019
Gumiguru 18, 2019
Gumiguru 17, 2019
Gumiguru 16, 2019